Home Child Entertainment ကလေးတွေအတွက် ဂန္တဝင်ဂီတရဲ့ အရေးပါမှုနှင့် အကောင်းဆုံးဂန္တဝင်တေးဂီတ (၇) ပုဒ်
ဂန္တဝင်ဂီတရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ခံစားမှုနှင့် အလှတရားတွေက ပြိုင်ဘက်ကင်းသောအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ကလေးတွေအတွက် ဂန္တဝင်ဂီတရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကျော်ကြားသော တေးရေးဆရာတွေရဲ့ အကောင်းဆုံး ဂန္တဝင်ဂီတစာရင်းကိုလည်း မျှဝေပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂန္တဝင်တေးဂီတကို နားထောင်တဲ့အခါ Mozart, Beethoven (သို့) Bach တို့လို ခမ်းနားသော ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ငြိမ်သက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေအတွက် ဂန္တဝင်ဂီတဆိုတာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအပေါ်မှာလည်း လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။
၁။ ဘာသာစကားရှာရာမှာ ကူညီပေးခြင်း
ဂီတကို စောစီးစွာ ထိတွေ့ခြင်းက ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်နယ်ပယ်တွေကို အသက်ဝင်စေပါတယ်။ အဲဒီ့နယ်ပယ်တွေထဲမှာ ဘာသာစကား သင်ယူမှုနှင့် စာဖတ်စွမ်းရည်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဂီတကို နားထောင်ခြင်းက ကလေးရဲ့ ဂီတနှင့် စကားပြောစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးကြောင်း သုတေသနပြုချက်တွေ ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာစကားမှာ နားထောင်သူတွေက မတူညီသော စကားပြောသံတွေအကြား ကွဲပြားစေဖို့ ကူညီပေးသော နောက်ခံစည်းချက်ပုံစံတွေရှိပါတယ်။ ဂီတပုံစံတွေနှင့် ထိတွေ့ခြင်းက ကလေးလေးတွေအနေနဲ့ အသံတွေကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ ကလေးငယ် အိပ်ပျော်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်
နူးညံ့သော ဂန္တဝင်ဂီတတွေကို သားချော့တေးအဖြစ် ဖွင့်ထားပေးခြင်းက ကလေးငယ်တွေအတွက် ငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကို ဖန်တီးပေးပြီး အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သာယာသော တေးသွားနှင့် ထပ်တလဲလဲပုံစံက နှလုံးခုန်နှုန်းကို လျော့ကျစေပြီး ကလေးကို အိပ်ပျော်စေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၃။ ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်း
ပုံမှန်အားဖြင့် ဂန္တဝင်သီချင်းတွေက နူးညံ့သိမ်မွေ့သော တေးသွားရှိကြပါတယ်။ တေးသွားတွေက ပျော့ပျောင်းပြီး ကလေးတွေအတွက် စိတ်ငြိမ်စေသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးက ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့အခါ ဂန္တဝင်သီချင်းတစ်ပုဒ်တီးတာက သူတို့ကိုသက်သာစေပြီး ပျော်ရွှင်မှုခံစားချက်တွေကို ထပ်မံဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ကလေးတွေကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကင်းပြီး ပျော်ရွှင်နေတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့ အလုံးစုံကျန်းမာရေးအတွက် အပြုသဘောဆောင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်များအတွက် ဂန္တဝင်ဂီတ (၁၂) ပုဒ်
ကလေးငယ်တွေ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့၊ ဖျော်ဖြေဖို့ (သို့) အိပ်ပျော်စေဖို့အတွက် ကူညီပေးချင်တဲ့အခါ ဒီဂန္တဝင်ဂီတတွေကို သတိရလိုက်ပါ။
၁။ Johann Sebastian Bach – Sheep May Safely Graze
ဒီလိုနူးညံ့ညင်သာသော အပိုင်းတွေက သာယာနာပျော်ဖွယ်အရည်အသွေးရှိပြီး ငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ လှပသော သဟဇာတဖြစ်မှုနဲ့အတူ ဒီဂီတဟာ သင့်ကလေးကို အိပ်ပျော်စေဖို့ (သို့) စိတ်တည်ငြိမ်စေဖို့ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
၂။ Brahms – Wiegenlied
Brahms ရဲ့ ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ရာ တေးသွားလေးတွေက ကလေးငယ်တွေအိပ်စက်ဖို့ ပြီးပြည့်စုံသောသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ကလေးကို အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ အနှောင့်အယှက်တစ်ခုခုပေးမိတဲ့အခါ ဒီတေးသွားလေးနဲ့ ပြန်လည်ချော့သိပ်လိုက်ပါ။
၃။ William Tell Overture, Gioachino Rossini
ဂန္တဝင်တေးဂီတက ကလေးငယ်တွေကို အိပ်စက်ဖို့အတွက်သာမက ရွှင်လန်းစေနိုင်သောတေးသွားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အော်ပရာဟာ စွဲမက်ဖွယ်တေးသွားတွေနဲ့အတူ လျှင်မြန်စွာ တီးခတ်ထားပြီး ကလေးတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Wolfgang Amadeus Mozart – Piano Sonata no. 11 in A
soulful sonata မှာ လှုပ်ရှားမှုသုံးမျိုးရှိပြီး Alla Turca ဆိုတာ တတိယလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီး မိုးဇက်ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးစန္ဒရားလက်ရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တေးသွားရဲ့ အတက်အဆင်းပျော့ပျောင်းမှုက သားချော့တေးအတွက် သက်ရောက်မှုများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ တီးခတ်ပေးဖို့ ပြီးပြည့်စုံသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Claude Debussy: Clair De Lune
Clair De Lune ဆိုတာ Moonlight ဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီးဂန္တဝင်တေးသွားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစန္ဒယားအပိုင်းကိုတော့ ရုပ်ရှင်တွေနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးတွေမှာ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို သရုပ်ဖော်ဖို့ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်အခြေအနေကို ဖန်တီးပြီး သင့်ကလေးကို အပန်းဖြေစေဖို့ တီးခတ်ပေးပါ။
၆။ Ralph Vaughan Williams – The Lark Ascending
ဒီလိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအပိုင်းကို George Meredith ကဗျာကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တယောတီးလုံးရဲ့ တဖျတ်ဖျတ်လွှင့်ထွက်သံက ကောင်းကင်ပြင်ကို ပျံတက်လာသော ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟန်ပန်ကို အပြည့်အဝဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ငှက်အော်သံကို နှစ်သက်တာကြောင့် ဒီနူးညံ့သိမ်မွေ့သော ဂန္တဝင်အပိုင်းက သူတို့ကို ပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်။
၇။ Air from Orchestral Suite no.3(Air on the G String)
ဒါကတော့ Bach ရဲ့ နောက်ထပ်လှပတဲ့ သံစဉ်တစ်ခုပါ။ ဒီဂီတဟာ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး သင့်ကလေးအတွက် စိတ်အပန်းပြေစေပါတယ်။ ဒီအမှတ်တရအပိုင်းအစတွေက သင့်ကလေးအတွက် Bach ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံသော မိတ်ဆက်မှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleကလေးတွေကို စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၃)ခု
Next articleမွေးကင်းစကလေးတွေအတွက် အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးစေမယ့် လုပ်ဆောင်ချက် (၄) ခု